ပိုးတွေ့သူကိုယ်တိုင် ပြောပြတဲ့ ရိုးမဆောင် (ဒဂုံဆိပ်ကမ်း) ရဲ့ အဆင်မပြေမှုများ - Zet Star
ပိုးတွေ့သူကိုယ်တိုင် ပြောပြတဲ့ ရိုးမဆောင် (ဒဂုံဆိပ်ကမ်း) ရဲ့ အဆင်မပြေမှုများ
စီစဥ်​ပေးတာ ​​ကျေးဇူးတင်​ပေမယ့် လက်​တွေ့ဖြစ်​နေတာ​​တွေ မသိတာလား မတင်ပြကြတာလား လှည့်မကြည့်နိုင်တာလား..​မေးချင်ပါတယ် Positive သမား​တွေ အ​ရေး​​ပေါ် ကုသရ​အောင်အတွက် အဆင်​ပြေ​နေတဲ့​နေရာက​နေ Q Center ​တွေကို ​ရွှေ့ကြတယ်။
မျှော်လင့်ထားတာ ဖြစ်သင့်တာ​တွေ ဘာမှမရှိပဲ အခန်းထဲမှာ ၄ ​ယောက်​နေရတယ် ​ အဲကွန်း​တွေ ပန်ကာ​တွေ မ​ပြောနဲ့ လေမရလို့ ဝရံတာထွက် ​လေရှုတာ​တောင် ​အောက်ကလှမ်း​​အော်ပြီး အထဲဝင်​နေပါ တံခါးပိတ်ထားပါ ​လော်နဲ့ ​အောက်က​စောင့်သူ​တွေကလှမ်း​အော်ခံရတဲ့ ဘဝ​တွေပါ…
တချို့အခန်း​တွေ ​ရေမရပါဘူး သုံး/ချိုး​ရေ အပြင် အိမ်သာတက်ဖို့​တောင် ​ရေမလာတာပါ…. ဒါ​တွေက ကိုယ်​တွေ့ ဖြစ်ပျက်​နေတဲ့ ရိုးမ​ဆောင် (ဒဂုံဆိပ်ကမ်း) Q စင်တာမှာပါ တခြားကိုယ်မသိတဲ့ ​နေရာ​တွေမှာ ဘာ​တွေဖြစ်​နေလဲက​တော့ ကိုယ့်​တွေ့ကြုံရတဲ့သူ​တွေက ပိုသိကြမှာပါ
အဆင်​ပြေလား​မေးရင် ဘယ်လိုပြန်​ဖြေရမှန်းမသိပါဘူး မကြုံ မဆုံရ​တော့ ဖြစ်​နေတာ​တွေ မမြင်နိုင်ပါဘူး ပြန်​ပြောဖို့လည်း အားမရှိပါဘူး… ကျန်းမာ​ရေးဘက်က ဘယ်သူ​တွေက ဘယ်လိုစဥ်းစားပြီး ဆုံးဖြတ်ကြလဲ တကယ်သိချင်မိတယ် က​လေးငယ်​တွေ အသက်ကြီးသမား​တွေ ပါတယ်။
အခုဆို ​ရောဂါ​ကြောင့်ထက် ဒီလို​တွေ​ရောက်မှ ခံစားရတဲ့ စိတ်ခံစားချက်​တွေ​ကြောင့် ​ကွယ်လွန်ကြရတာ ​​ရောဂါတိုးရတာပါ….ဒီ​ရောက်ပြီး အဖျားတိုင်းတာ ​ဆေး​တိုက်တာ ဘာဆို ဘာမှမလုပ်​ပေးနိုင်ပဲ ဘာလို့များ ​ခေါ်ထားကြတာလဲ? အ​ရေး​ပေါ်အတွက် ဘာ​တွေစီစဥ်ထားလဲ? အခုပဲ ရိုးမ​ဆောင် တိုက် ၆၆ မှာ အသက်ရှုကြပ်တာ အခန်း​တွေအားလုံးက ထွက်ပြီး ​အော် အကူအညီ​တောင်းရတယ်။
ရောက်လာ​တော့လည်း ကျွန်​တော်​တို့က စေတနာ့ဝန်ထမ်း ပါဆိုပြီး ဖုန်းဆက်လို့မပြီးနိုင်ဘူး ​အောက်ဆီဂျင်ဘူး အသင့် မရှိ…..ဒါဆို ဘာလို့များ အရမ်း​တွေ ​ခေါ်ထားပြီး ဒုက္ခ​တွေ ခံခိုင်း​နေတာလဲဟင်…
← ကိုဗစ် ရောဂါနဲ့ လုံးဝလျှော့တွက်လို့ မရတဲ့ ကြက်ဥပြုတ်
လူနာဖြစ်နေတာ‌တောင် တခြားသူတွေကို ကူညီပေးတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ဖောင်ကြီးရဲ့ တကယ့်အခြေအနေ →